एक पुरुषले देखेको महिला हिंसा - Thahaonline.com | थाहा अनलाइन Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०८:२१
एक पुरुषले देखेको महिला हिंसा
थाहा अनलाइन ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २०:११ मा प्रकाशित
महिला ,नारी, धर्ती माता धेरौ सम्मानित शब्द ले सम्बोधन गरीए पनि संसारको जनसंख्याको ४९.६ प्रतिशत ओगटन सफल महिला थोरै बढी ५०.४ प्रतिशत हिस्सा भएको पुरुषबाट सधै किन हिंसामा पर्छन ? आज यो विषयमा म कलम चलाउन चाहन्छु । केही दिन अघि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिबले विश्व भरी नै लकडाउन को समयमा महिला हिंसामा व्यापक बृद्धी भईरहेको तथ्य सार्बजनिक गरेको छ । र भनेको छ यसमा गम्भीर भएर सोच्न पर्ने बेला आएको छ । यो अभिव्यक्ति अनुसार नै के साच्चैमहिला यो माहामारीको समयमा हिंसामा छन त ? के महिलालाई सधै पुरुषले हिंसाको सिकार बनाइरहने हो त ? महिला के कारणले हिंसामा परेका छन त? कहाँ, कहाँ हिंसाको सिकार छन त ? नेपाली समाजमा महिला हिंसा कसरी कहाँ कहाँ हुन्छन् त ?
नेपाली समाज यस्तो समाज हो जहाँ एक महिला जन्मनु अघि नै हिंसाको सिकार हुन्छे । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो गलत संस्कार संस्कृति नै हो । नेपाली समाज छोरो पाउँदा आफूलाई खुब गर्वको अनुभुती गर्दछ । आफुलाइ भाग्यमानी सम्झन्छ ,भगवान को कृपा सम्झन्छ । हाम्रो समाजमा छोरो पाउँदा गरिने धार्मिक संस्कार मनोरन्जन खर्च र छोरी पाउँदा गरिने खर्चमा ब्यापक विभेद गर्छन । नेपाली समाजमा यस्ता गलत उखान पनि प्रचलीत छ “ढिलो होस छोरो होस “यो गलत संस्कार को उपज भन्छु म । छोरी पाउदा खिन्न मन गर्ने ,अभागी रहेछु । खप्पर बलियो नभए पछी केही लाग्दैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन पछी पर्दैनन् । झनै छोरा पाउने रहरमा आधुनिक प्रविधीले गर्दा हजारौं छोरीहरु गर्भमा नै पतन हुन विवश छन् । आखिर ती भ्रुणहरुको के दोस हुन्छ र जन्म लिनुमा ? जन्म लिन पाउने तिनीहरुको प्राकृतिक अधिकार होइन र ? तर हामी आफ्नो गलत सोचाइ गलत रितिरिवाजको अन्धकारमा रुमालिएर एक छोरीको भ्रुण हत्या गर्न पछि पर्दैनौ । एक महिला आफू महिला नै हुन्छे तर छोरो पाउने आशामा छोरीको भ्रुण हत्या गर्न पछी पर्दिन उसलाई पनि थाहा छ “म“ महिला हु भन्ने । तर किन गर्छे त त्यो क्रुर काम ? आधुनिक समाज लाई थाहा छ छोरा छोरा जन्मने कुरा मा महिला पुरुष दुबैको बराबर हिंसा हुन्छ भन्ने तर पनि छोरी जन्मदा अझै पनि महिला लाई नै दोस थुपार्ने प्रचलन किन त ?
जन्मिए पछिको हिंसा
नेपाली समाजमा जब छोरी जन्मिन्छे फेरि हिंसा भोग्न तयार हुनु पर्ने हुन्छ । जन्मन भन्दा अघी नै देखि संघर्ष गर्दै जन्मन्छे फेरि जन्मीए पछी पनि बाचुन्जेल सम्म पुरुष संग संघर्ष गरीरहन्छे । पछिल्लो पुस्तामा केही कमी आएको मात्र हो महिला हिंसा निर्मुल भने भएको छैन । आज भन्दा १० बर्स अघि सम्म पनि घर मा दुई सन्तान एक छोरा ,एक छोरी छन भने छोरो लाई निजी स्कुल हाल्ने चलन थियो । छोरीलाई सरकारी अझैपनि प्रशस्त देख्न सकिन्छ । एकै बाउका सन्तान एउटा (छोरा )दैनिक सुकिलो मुकिलो लुगा आवत जावत बसमा, दैनिक मुख फेरिफेरि खाजा , शैक्षिक गुणस्तर राम्रा भएको विद्यालयमा अध्यन गराइन्छ । छोरीलाइ सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराइन्छ । यो त शिक्षामा गरिएको विभेद हो समाजमा छोरीलाइ गर्ने विभेद कति हो कति । जब अली हुर्किदै जान्छे विभेदको रुप पनि परीबर्तन हुँदै जान्छ ।
समाजले गर्ने हिंसा
जब उ पन्ध्र, सोह्र वर्ष तिर लाग्छे घर र अभिभाबकको त विभेद सहन पर्छ नै समाजबाट पनि विभेदको सिकार हुन्छे । उसले गर्ने हरेक गतिविधिमा समाजको चासो हुन्छ । समाजले सहज रुपमा स्वीकार गर्दैन किशोर अवस्था जुन बेला केटा होस या केटी अत्याधिक मात्रामा सिक्न सक्ने र खोज्ने बेला हो , हिन्ने खाने रमाइलो गर्ने बेला हो । समाज भन्छ हेर फलानीको छोरी कति उत्ताउली, बाउ आमाले तह लाउन नसकेकी । उसको बोलीचाली हाउभाउ घुमफिर आदि मा समग्र समाजले मुल्याकंन गरिरहेको हुन्छ । हेर कस्तो छोटो लुगा लगाएकी, हेर कति मेकप गरेकी, कपाल रातो, फलानीको छोरी ले नाक काट्ने भै । यसको त बाउ आमाले दिएर विवाह हुदैन पोइला जान्छे , संस्कार नसिकेकी ,सोमत न भाकी, यस्ता तर्कहरु समाज गरिरहन्छ । माथी भनिएका कुराहरु महिलाको व्यक्तिगत अधिकार भित्र पर्दैन र ? काहँ जाने ?के खाने ?के लाउने? कसरी हिन्ने ?भन्ने उसको मानव अधिकारको कुरा होइन र ? यस्तो प्रतिबन्ध समाजमा पुरुषले मात्र होइन महिलाले महिला लाई नै गर्छन । जस्तै आमाले छोरीलाई समाजका महिलाले यौवन महिलालाई । मानव जातीमा पोथी सुन्दर हुने खोज्ने प्राकृतिक गुण हो । जीव जनावरमा भाले सुन्दर हुने प्राकृतिक गुण हो भन्ने कुरा समाज चटकै भुलिदिन्छ । फेरि तेही व्यवहार खानपान फेसन हीडाइ बोलाइ छोरा ले गर्दा सबै समाज लाई नै सहज लाग्छ । किन त..? कमजोरी हाम्रो सोचाइ अनि संस्कार पुरुष प्रधान समाज को अन्धो नजर होइन र ? केटीले जस्तै व्यावहार हरु यदी केटाले गर्यो भने समाजले भन्छ आजकालका उरनठेउला केटाहरु यस्तै हुन भन्ने सहज जबाफ आउँछ । एउटै व्यवहार लाई हेर्ने नजर पनि समान हुन पर्ने होइन र ? समाज अजै उदाहरण दिन्छ छोरी भनेको सेतो कपडा हो है दाग लाग्यो भने सजीलै देखीन्छ । इज्जत भन्ने कुरा महिला र पुरुष छोरा र छोरीको फरक हुन्छ र ? दाग पुरुष मै लागे पनि नदेखीने त होइन होला ..? एउटै घरको छोरो राती अबेर आउदा अभिभावक प्रश्न गर्दैन छोरी अबेर आउदा अभिभावक प्रश्न गर्छ कि न? कसरी ? कहाँ ? उस्ले परिवारलाई जबाफ दिन पर्छ के यो महिला हिंसा होइन र ?
विवाह गर्ने समयमा हिंसा
विवाहको साधारणतया स्वीकृत र समाहित परिभाषा निम्नानुसार छन् दुई व्यक्तिको बीच एक औपचारिक मिलन र सामाजिक कानूनी सम्झौता जसले उनीहरूको जीवनलाई कानूनी, आर्थिक, र भावनात्मक रुपमा एकजुट गर्दछ । विवाहले यौन सम्बन्धलाई पनि वैधानिता दिन्छ । एक महिला जब वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने समय हुन्छ नेपाली समाजमा फेरि महिला हिंसाको सिकार हुन्छे । समाज ’भन्छ ,लै है छोरी हुर्काएर राख्दा राम्रो हुन्न । नाक मा गु लाइदिन सक्छे, छोरी उमेर ढल्काएर राख्न हुन्न , एउटा भने जस्तो आए दिए हुन्छ जस्ता कुरा समाजले गर्दै जान्छ । भैंसी किन्न ग्रहाक आएर राम्रो मूल्य पाएर बीच्न खोजे जस्तो व्यवहार समाज आफन्तको हुन्छ । केटीको मन नहुदा नहुदै पनि आमा बाउ आफन्त र समाजले भन्छ केटा धनी छ , खान्दान राम्रो छ । जग्गा जमीन छ शहरमा जस्ता भैतिक लोभ देखाएर भावना बेच्न बाध्य बनाइन्छ त्यहाँ महिलालाई दबाब नै श्रृजना गरिन्छ । तर जीबन खुसी हुने साधन धन सम्पतीले मात्र त होइन होला ? भावना पनि मिल्न पर्ला । तेही घरमा छोरो ३० पुग्न लागि सकेको हुन्छ समाज अभिभावक प्रश्न गर्दैन बेला भाको छैन अब
केही गरेर गर्ला नी । लै है बाबू बीबाहा त आफ्नो खुट्टामा उभीएर गर्न पर्छ यस्तै यस्तै । तेही परिवारमा छोरीलाई विवाह गरेर पनि केही गर्न सकिन्छ गरे हुन्छ विवाह यो डाइलग छोरीले बार बार सुन्न पर्ने आबाज हो के यो महिला हिंसा होइन र, ?
विवाह पछि परिवारमा हिंसा
जब विवाह हुन्छ पहिलो दिन हिंसामा पर्छन महिला विवाह गरेको अघिल्लो दिन देखिको थकान मानसिक तनाब कोलाहलबाट केटाको घर आकी हुन्छे । रातभरी रत्याउली खेल्नेहरुले सुत्न देका हुदैनन हो हल्लाले । विहान सबेरै उठेर दैलो कसेर चुलो तलो धारो पधेरो नयाँ बुहारीले गर्नपर्ने हाम्रो संस्कार छ । यहाँबाट नै एक प्रकार को हिंसा परेकी हुन्छे उ । यो संस्कार ले गरेको हिंसा हो । यदी उ अली चालाख छे काम व्यवहार जानेकी छ भने समाज भन्छ जागरीली रैछे । फलानीकी बुहारी । यदी उ काम नगरेकी रैछे भने ,अली काम व्यवहारमा परेकी रैनछ भने फेरि महिला हिंसामा पर्छन । आमा चै ले केही सिकाएकी रैनछ माइतामा यस्तो रैछे उस्तो रैछे हाम्रा छोरी यस्ता थीई उस्तो थीइ जस्ता मानसिक हिंसामा पर्दछे । जुन हिंसा महिलाबाट महिला लाई नै हुने गर्दछ लक डाउनको समयमा सामाजिक सन्जालमा देखीएको धेरै दृस्यहरु महिला हिंसा अन्तर्गत थिए । जहाँ पुरुषहरु जुवा तास खेलिरहेका महिलाहरु तिनिहरुलाई भेराइटिहरु बनाएर खुवाइ रहेका दृश्य थिए के त्यो काम पुरुषले गर्न हुदैन थियो ? आखिर सबै फ्रिनै देखीन्थे । यो हाम्रो सांस्कृतिक हिंसा हो ।
युरोपियन समाजमा भनौ वा विकसित समाजमा भनै हिंसा कम छ नेपाली समाज मा भन्दा जहाँ मानव अधिकार हुन्छ त्यहा महिला हिंसा कम हुन्छ विकसित समाजमा महिला आफू नै आत्म निर्भर हुने र बहु– विवाहलाई पनि समाजले सामान्य रुपले लिने भएको ले यसको दरमा कमी भएको हो जब सम्म नेपाली महिलाहरु आफै सबल हुदैन्न तब सम्म महिला हिंसा जारी नै रहन्छ । आज श्रीमान संग झगडा गर्यो बेलुुका उसले खाने खर्च दिएन भने भोकै बस्न पर्ने अवस्था रहुन्जेल सम्म महिला हिंसा कायम नै हुन्छ ।
लेखक हाल अध्ययनको शिलशिलामा पोर्तुगल रहँदै आएका छन् । उनी सामजिक र राजनितिक विषयबस्तु माथी समय सान्दभिक लेख लेख्ने वहस चलाउने गर्छन् ।